जथाभावी प्रयोगले ९०% सम्म काम नगर्ने भए एन्टिबायोटिक्स, प्रतिरोधको खतरा बढ्दै – Health Post Nepal
जथाभावी प्रयोगले ९०% सम्म काम नगर्ने भए एन्टिबायोटिक्स, प्रतिरोधको खतरा बढ्दै
२०७६ मंसिर ११ गते ९:४९
तपाईं पनि यदि स्वास्थ्यसम्बन्धी सानातिना समस्यामा एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नुहुन्छ भने सावधान हुनुहोस्, यो बानीले तपाईंको स्वास्थ्यमा विभिन्न तरिकाले नोक्सानी पुर्याउँछ । दैनिक जिन्दगीमा प्रायः हामी टाउको तथा पेट दुख्ने, ज्वरो आउनेजस्ता सामान्य समस्यामा पनि चिकित्सकको सल्लाहविनै जुनसुकै एन्टिबायोटिक औषधिको सेवन गर्ने गर्छौं । तर, चिकित्सकहरू आवश्यकभन्दा बढी एन्टिबायोटिकको सेवनले डायरियाजस्ता पेटसम्बन्धी गम्भीर समस्याका साथै दीर्घकालीन समस्या निम्तिन सक्ने चेतावनी दिन्छन् ।
एन्टिबायोटिकको गलत प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका क्लिनिकल फर्माक्लोजिस्ट डा. सतिसकुमार देव बताउँछन् । ‘एन्टिबायोटिकको गलत प्रयोगले हामीलाई मात्र असर पुर्याएको छैन,’ डा. देव भन्छन्, ‘एन्टिबायोटिकको दुरुपयोगका कारण भावी सन्तानमा समेत असर पुगिरहेको छ ।’ विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एन्टिबायोटिकले काम गर्न छाडेमा सन् २०५० पछि प्रतिवर्ष ब्याक्टेरियाका कारण हुने संक्रमणबाट विश्वमा १ करोड मानिसको मृत्यु हुने अनुमान छ ।
‘सिप्रोफ्लोक्सासिन नामक औषधिले सुरुमा आउँदा सबै टाइफाइड ठिक हुन्थ्यो, तर सजिलैसँग जहाँ पनि किनबेच हुने भएपछि जथाभावी प्रयोग हुन थाल्यो,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंह भन्छन्, ‘हाल सिप्रोफ्लोक्सासिनले टाइफाइडमा ९० प्रतिशत कामै गरेको पाइँदैन । एन्टिबायोटिकको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ, जसको रोकथामका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम मुलुकभर लानुपर्छ ।’
सरकारले एन्टिबायोटिकको प्रयोगलाई श्रेणीगत रुपमा विभाजन गरेको छ, तर डाक्टरले मान्दैनन् मापदण्ड
सरकारले एन्टिबायोटिक प्रयोगका लागि ४ वटा मापदण्ड तयार गरेको छ । कसलाई कुन अवस्थामा कुन एन्टिबायोटिक दिने भन्ने निर्धारण सरकारले गरेको छ । तर, डाक्टरले नै एन्टिबायोटिक औषधि जथाभावी प्रेस्क्राइब गर्ने गरेका उदाहरण हामीसामु छन् । एन्टिबायोटिकको दुरुपयोग रोक्न बिरामी आफैँ सचेत हुनुपर्ने डा. सिंह बताउँछन् ।
‘ज्वरो आएका वेला आफैँ टाइफाइडको औषधि किन्न फार्मेसी जानुभन्दा डाक्टरकोमा गएर चेजजाँच गराई खानु वुद्धिमानी हुन्छ,’ डा. सिंह भन्छन्, ‘एन्टिबायोटिक पूरा कोर्समा लिइएन भने पनि पछि स्वास्थ्यमा गम्भीर असर देखापर्दछन् ।’
वर्तमानमा ‘एन्टिबायोटिक प्रतिरोधक क्षमता’ विश्वको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य समस्यामध्ये एक रहेको डा. सिंह बताउँछन् । तसर्थ, हामीले एन्टिबायोटिकको सही उपयोग र तिनका कामबारे धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई सुसूचित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसले यो समस्याको निदान हुन सकोस् । हामीले एन्टिबायोटिकको गलत प्रयोगको समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिनु जरुरी छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार जथाभावी एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग गरेकै कारण विश्वमा हरेक ४५ सेकेन्डमा एकजनाले ज्यान गुमाइरहेको जनाएको छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोग भइरहेको संगठनको अनुमान छ । कुनै पनि एन्टिबायोटिकको गलत वा आवश्यकताभन्दा अधिक प्रयोगले अनेक समस्या निम्तिन सक्छन् । जस्तै, लामो समयसम्म इन्फेक्सन निको नहुनु । यसले एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स अर्गानिजम पनि विकसित हुन सक्छ । चिकित्सकको सल्लाहविना कुनै एन्टिबायोटिक लगातार लिइएमा भने यो खतरा झनै बढ्न सक्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार एन्टिबायोटिक भनेका भाइरसको संक्रमणबाट रोक्न र भाइरसको उपचारका लागि उपयोग गरिने औषधि हुन् । एन्टिबायोटिक प्रतिरोध तब हुन्छ, जब यी औषधिको उपयोगको जवाफमा ब्याक्टेरियाले आफ्नो स्वरूप बदल्छन् ।
डब्लुएचओका अनुसार खास आवश्यकताविना एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग गर्नाले एन्टिबायोटिक प्रतिरोधमा वृद्धि हुन्छ, जो वैश्विक स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा ठूला खतारमध्ये एक हो । लामो समयसम्मको एन्टिबायोटिक प्रतिरोध संक्रमणले बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना गराउनुपर्ने हुन सक्छ । यस्तोमा उपचारका लागि ठूलो धनराशि खर्च हुनुका साथै बिरामी गम्भीर भएर मृत्युसमेत हुन सक्छ ।
डब्लुएचओका अनुसार एन्टिबायोटिक प्रतिरोध संक्रमणले कुनै पनि देशको कुनै पनि उमेरसमूहका मानिस प्रभावित हुन सक्छन् । साथै, ब्याक्टेरिया एन्टिबायोटिकको प्रतिरोध भएपछि पूर्ण रूपमा संक्रमणको उपचार र नियन्त्रण सम्भव हुँदैन । एन्टिबायोटिकको अल्पउपयोग, अतिउपयोग र दुरुपयोगले ब्याक्टेरियाले आफ्नो क्षमता बढाउँदै गएको पाइएको छ । एन्टिबायोटिकलाई चिकित्सकको सिफारिसविना प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । तर, औषधि पसलबाट सहज रूपमा एन्टिबायोटिक बिक्री भइरहेको पाइएको छ ।